घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका फुटबल खेलाडीहरू जियोवन्नी रेना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो जियोवन्नी रेना जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कथा, अर्ली लाइफ, आमा बुबा, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट मूल्य र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो फुटबलरहरूको जीवनयात्राको कहानी हो, बाल्यकालदेखि, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उसको पालना छ - जियोभनी रेनाको बायोको एक सारांश।
जियोभन्नी रेनाको जीवन कथा।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ उही हुनुहुन्छ बोरुसिया डार्टमन्डको सानो आश्चर्य। जहाँसम्म, केवल केहि थोरैले जियोभन्नी रेनाको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जियोभन्नी रेनाको बाल्यकाल कहानी:
जियोभन्नी रेनाको बाल्यकालको फोटोहरू मध्ये एक।
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि उनी उपनाम पाएको छ “कप्तान अमेरिका“। जियोभन्नी अलेजेन्ड्रो रेना नोभेम्बर २००२ को १ 13 औं दिन इ England्गल्यान्डको सुन्दरल्याण्ड शहरमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नी आमा डेनियल इगनको जन्माउने चार छोरामध्ये दोस्रो हुनुहुन्छ Reyna र उनको बुबा क्लाउडियो रेना।
जियोभन्नी युरोपमा जन्मेका भए पनि उनी अमेरिकी नागरिक भनेर व्यापक रूपमा चिनिन्छन् किनकि उनले आफ्नो बाल्यावस्थाको राम्रो अंश न्यु योर्क शहरमा आफ्नो जेठो भाई, ज्याक र कान्छो भाइबहिनी जोआह र क्यारोलिनासँगै बिताए।
जियोभन्नीको बाल्यकालको फोटो (बायाँ बायाँ) आफ्ना भाइहरू र बहिनीसँगै न्यूयोर्कमा हुर्किएको।
न्यु योर्कमा हुर्केका, जियोभन्नी एक असामान्य प्राकृतिक एथलीट थिए जोसँग कुनै किसिमको ट्र्याक र क्षेत्र कार्यक्रममा भाडा लिनको लागि थियो। वास्तवमा, उसको गोल्फमा प्रारम्भिक रुचि थियो र उसले basketball बर्षको उमेर भन्दा पहिले बास्केटबल डुबाउन सक्छ।
जियोभन्नी अन्तत: years बर्षको उमेरमा, उनले आफ्ना बुबाआमाको खुशीमा पार्कमा फुटबल खेल्न शुरू गरे जसले आफ्नो दोस्रो छोरालाई फुटबलमा चासो देखाए र यसलाई आफ्नो बाल्यकालको खेलको रूपमा अपनाए।
जियोभन्नी रेनाको पारिवारिक पृष्ठभूमि:
हो, जियोभन्नीका बुवा र आमा गरिब थिएनन् तर बाल्यकालको फुटबल प्रयासमा उनीहरूले पाएको खुशी न्यायसंगत थियो किनभने दुवै आमा बुबा दुवैको खेल खेल्ने महत्वपूर्ण इतिहास छ। जियोभन्नीकी आमासँग सुरु गर्न, उनी पूर्व पेशेवर फुटबलर र संयुक्त राज्य अमेरिका महिला राष्ट्रिय फुटबल टीमको पूर्व सदस्य थिइन्। तल चित्रण गरिएको छ जिओभनी रेनाका अभिभावकहरूको एक प्यारा फोटो (क्लाउडियो र डेनियल ईगन)।
जियोभन्नी रेनाका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्।
उनको तर्फ, जियोभन्नीका बुबा संयुक्त राज्यको एक अन्तर्राष्ट्रिय पनि थिए जसले इतिहास ग्लासगो रेंजर्स, म्यानचेस्टर सिटी र सुन्दरल्याण्डका लागि खेल्दै थिए जहाँ उनका दोस्रो छोराको जन्म भएको थियो। यसप्रकार, यो स्वाभाविक मात्र हो कि तिनीहरूले खेलमा क्यारियर बनाउनको लागि उनीहरूको बाटोमा हिंड्नको लागि जियोभन्नीको चासोमा रमाए।
जियोभन्नी रेनाको शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
जब समय सहि थियो, एक युवा र महत्वाकांक्षी जियोवन्नी न्यू योर्क शहर फुटबल क्लब (एनवाईसीएफसी) एकेडेमी प्रणालीको हिस्सा भए जहाँ उनले फुटबल शिक्षामा व्यग्र क्यारियर निर्माण गर्न शुरू गरे।
उनी धेरै कलिलो उमेरमा एनवाईसीएफसीको अंश भए।
जिउँदो फुटबल खेल्ने तिनीहरूको केटाको चाहनालाई बुझ्दै, जिओभनी रेनाका अभिभावक (क्लाउडियो र डानिएल इगन) ले उनका चाहनाहरूलाई समर्थन गर्न यथासक्दो गरे। जियोभन्नीले व्यापार सिक्दै गर्दा उनले निर्देशनहरूलाई ध्यान दिएर ध्यान दिएका थिए र शारीरिक र मानसिक विकासको अभाव भेटिएन। वास्तवमा, उहाँ एक अद्भुत फुटबल उन्मत्त हुनुहुन्थ्यो जसलाई थाँहा थियो कि ऊ फुटबलको उज्जवल भविष्य छ।
जियोभन्नी रेनाको फुटबलमा प्रारम्भिक वर्षहरू:
त्यस्तै गरी, जिओभन्नीको स्तरमा भएको वृद्धि द्रुत थियो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्णता मेरिटमा थियो किनभने उनका बुवा - क्लाउडियो एनवाईसीएफसीका खेल निर्देशक थिए तर उनले युवाका लागि स्वार्थी चाहनाहरूलाई प्रबर्द्धनमा प्रभावको लामो हात प्रयोग गरेनन्।
तसर्थ, जियोभन्नीको प्रगति पारदर्शी र उनका साथीहरु र सराहनीय थिए जसले निष्कर्षमा पुगे कि तिनी एक प्राकृतिक थिए जसले भविष्यमा एकेडेमीलाई गर्व गर्नेछन्।
खेलमा जियोभन्नीको उज्ज्वल भविष्य यसभन्दा पहिले एनवाईसीएफसीमा उनका साथीहरू र प्रशिक्षकहरूले देखेका थिए।
जियोभन्नी रेनाको ख्याति कथा को मार्ग:
एनवाईसीएफसीमा जियोभन्नीको खेल प्रयासको चरम सीमामा, उनले अप्रिल २०१ 2017 मा जेनेरेशन एडिडास कप जित्नको लागि आफ्नो टीमलाई मद्दत गर्न निकै राम्रो प्रदर्शन गरे, त्यस टूर्नामेन्टमा १ the बर्ष उमेरका पनि उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा देखा परेका थिए।
बढी के? जियोभन्नीले यु.एस. १s१s को प्रतिष्ठित टोरनिओ डेल नाजिओनी युवा प्रतियोगिता जित्न मद्दत गरे र एनवाईसीएफसीसँग १ 15 पटक १ sc गोलमा १ 2017 गोल दागेर २०१ 18/१13 को कडा फिर्ता भयो।
के तपाईं उसलाई सेलिब्रेटि team टोलीमा देख्न सक्नुहुन्छ?
जियोभन्नी रेनाको जीवनी- ख्याति कथा उठ्नुभयो
त्यस्तो उत्कृष्ट प्रदर्शनको साथ, यो अचम्मको कुरा होइन कि बोर्सिया डोर्टमन्डले मिडफिल्डरको सेवाहरू सुरक्षित गर्नमा समय खेर फाल्यो। उहाँ सुरुमा २०१ side/२०१० मा जापानी ब्रेकको समयमा क्लबको पहिलो टीममा पदोन्नति कमाउनु अघि जर्मन पक्ष यु १ team टीमको लागि खेल्ने बनाइएको थियो।
बोरुसिया डार्टमन्डका लागि बुन्डेशलिगा पदार्पण गरेपछि, यो जियोभन्नीको लागि रेकर्ड पछि रेकर्ड भयो जसले विचलित गरे क्रिश्चियन पुलिस सबैभन्दा कम उमेरका अमेरिकी बने पछि बुंडेस्लिगामा देखा पर्न।
के तपाईंलाई थाँहा छ कि जियोभन्नी जर्मन कप इतिहासको सबैभन्दा कान्छो गोल स्कोरर पनि बने जब उनले १2को डीएफबी-पोकल राउन्डमा वेर्दर ब्रेमेनलाई २-– ले हराउँदा नेटको पछाडि भेट्टाए?
१ly दिन पछि मात्र, जियोभन्नी खेल खेल्ने र च्याम्पियन्स लिगमा सहायता रेकर्ड गर्ने सबैभन्दा कान्छो अमेरिकी बन्न सफल भए। अर्लिå हल्यान्डको खेल-जीत गोल बरुसिया डार्टमंडले PSG मा २-१ ले जित्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
कसले एरलिå होल्यान्डलाई यस्तो सहयोग प्रदान गर्‍यो हेर्नुहोस् कि डार्टमन्डलाई विजयी बनायो।
जियोभन्नी रेनाको केटी
फियो र प्रेस खुसी छैनन् कि जियोवन्नीले उनको प्रभावशाली फुटबल प्रदर्शन र रेकर्ड सेटिंग स्प्रेको लागि मात्र समाचार बनाउँदछन्। त्यस्तै रूपमा, उनीहरु उनको प्रेमिकाको बारेमा जान्न उत्सुक छन् वा उसको गोप्य श्रीमती छ कि छैन भनेर जान्न चाहन्छन्।
दुर्भाग्यवश, यस्ता चाहनाहरू जारी रहिरहन्छ किनकि जियोवन्नी यो जीवनी लेख्ने क्रममा १ 17 वर्ष मात्र उमेरका छन् र कुनै छोरा (छोरी) वा छोरी (हरू) विवाहबाट बाहिर छन।
युवा, सफल र सुन्दर Giovanni फरवरी २०२० मा जस्तै एक्लो छ।
यसमा कुनै श doubts्का छैन कि मिडफिल्डरले प्रेमिका वा श्रीमतीलाई प्राथमिकतामा राख्दैन। यो बरुसिया डोर्टमन्डको पहिलो टीमसँग आफ्नो स्थिति मजबूत गर्न सेट भएको हुँदा यो आउँदैछ। त्यसकारण, शीर्ष फ्लाइट फुटबलको अर्को दशकमा बाहिर हेर्नको लागि युवा फुटबल प्रतिभावानको संगमरमरमा उनको नाम एच्च।
जियोभन्नी रेनाको पारिवारिक जीवन:
यो निर्विवाद सत्य हो कि खेलकुदमा पनी परिवार एकै साथ रहन्छ। यस खण्डमा, हामी तपाइँलाई जियोभन्नीका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा बुबाआमाबाट जानकारी ल्याउने छौं।
जियोभन्नी रेनाको पारिवारिक जीवनबारे जान्ने।
जियोभन्नी रेनाको बुबाको बारेमा अधिक:
क्लाउडियो रेना मिडफिल्डरका बुबा हुन्। उसको नामको आधारमा, तपाई सजिलै अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि उहाँसँग अ English्ग्रेजी परिवारको जरा छ। सत्य हो, जियोभन्नी रेनाका बुबा "claudio"अर्जेन्टिना र पोर्तुगाली परिवारको मूल हो। भूतपूर्व पेशेवरहरूले अभिनय गरेजस्तै क्लाउडियोले जियोभन्नीको युवा प्रशिक्षणमा सक्रिय भूमिका खेले र शीर्ष उडान फूटबलको उकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
जियोभन्नी रेनाको आमाको बारेमा अधिक:
उत्कृष्ट खेलकुद आमाहरूले खेलकुद छोराको उत्पादन गरेका छन र जियोभानी रेनाकी आमा पनि यसको अपवाद छैन। डेनियल इगन रेना एक अमेरिकी रिटायर्ड फुटबल खेलाडी हुन्, जसले एक पटक संयुक्त राज्य अमेरिका महिला राष्ट्रिय फुटबल टीमको लागि १ 1993cer played मा खेलीन्। तल जियोभन्नी (उनको छोरो) सँग चित्रण गरिएको छ, दुबैमा एक विशेष बन्धन छ।
जियोभन्नी रेनाको मम, डानिएल इगनको बारेमा थप।
जियोभन्नी रेनाका भाईबहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
मिडफिल्डरका तीन भाई बहिनीहरू छन् जो उनीसँग हुर्किए। तीनिहरुमा उसको जेठो भाई ज्याक र कान्छो भाई - जोआ र क्यारोलिना छन्।
जियोभन्नी जस्तै, ज्याकको फुटबल र बास्केटबलमा प्रारम्भिक रुचि थियो तर बाल्यकालको क्यान्सरबाट ग्रस्त थियो जसले १ un वर्षको हुँदा उसको अकाल मृत्यु भयो। मिडफिल्डरको बाँकी भाईबहिनीहरूको कुरा गर्नुहोस्, उनका कान्छो भाइ जोआले खाना पकाउन र फुटबलमा चासो राख्दछन् जबकि परिवारकी इकलौती छोरी क्यारोलिना जिओवानी रेयानाको जीवनी लेख्दा धेरै खेलकुदमा छिन्।
मिडफिल्डरको आफ्नो आमा, बुबा र भाइबहिनीको साथ फोटो।
जियोभन्नी रेनाको व्यक्तिगत जीवन:
जियोभन्नीको जीवन फुटबलबाट टाढा हुँदै, उनीसँग एक धनी व्यक्तित्व छ जुन व्यक्तिको उत्कट, सहज, महत्वाकांक्षी र उत्कृष्ट गुण झल्काउँछ जसको राशि वृश्चिक हो।
मिडफिल्डर जसले मध्यम र उसको निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू प्रकट गर्छन्, चासो र शौकहरू छन् जसमा गल्फ खेल्नु, बास्केटबल खेलसँगै राख्नु र आफ्ना साथीहरू र परिवारसँग गुणस्तरीय समय बिताउनु समावेश छ।
यो जियोज्नी फुर्सतको लागि गल्फ खेल्दै गरेको दुर्लभ तस्बिर हो।
जियोभन्नी रेनाको जीवन शैली:
जियोभन्नीको जीवनशैलीको बारेमा, उनको कुल सम्पत्ति लेखनको समयमा अझै पूनरावलोकनमा छ तर यसको बजार मूल्य € मिलियन डलर छ। यस्तो मूल्यको साथ, यो स्पष्ट छ कि मिडफिल्डर एक प्रमुख कमाई गर्ने वा ठूलो खर्च गर्ने व्यक्ति होइन।
त्यसकारण, मिडफिल्डर आफ्नो टिम साथीको विलासी जीवनशैलीमा बस्नु भएको देख्न गाह्रो छ जो विदेशी सवारी र आफ्नै महँगो घरहरूको साथ जर्मनीको सडकहरूमा आउँछन्। जे होस्, उहाँ विशेष अवसरहरूमा र साथीहरूसँग पार्टीमा उपस्थित हुन उत्कृष्ट पोशाक गर्नुहुन्छ।
यो मिडफिल्डर्स ड्रेस क्लासी देख्न हरेक पटक होइन तर जियोभान्नीले गर्छन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जियोभन्नी रेनाको तथ्यहरू:
हाम्रो जियोभन्नी रेनाको बाल्यकाल कहानी र जीवनी समेट्न, उनको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
जब उनी डार्टमन्ड फुटबल दृश्यमा भाँचे, धेरै प्रशंसकहरूले जियोभन्ने रेना कती कमाउँछन् भनेर थाहा पाउन इन्टरनेटमा बोकेका छन्।। सत्य हो, टीउसले BVB सँग मिडफिल्डरको सम्झौतामा हमला गरीरहेको छ उसले वरिपरि ठूलो तलब जेबमा राखेको छ € 600,000 प्रति वर्ष। थप आश्चर्यजनक तल जियोभन्नी रेनाको तलब ब्रेकडाउन प्रति वर्ष, महिना, दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड (लेखेको समयमा जस्तो हो) हो।
प्रति वर्ष आय € 600,000 £ 522,767.12 $ 669,501.00
प्रति महिना आय € 50,000 £ 43,563.9 $ 55,791.75
प्रति हप्ता आय € 12,500 £ 10,890.98 $ 13,947.9
प्रति दिन आय € 1,785.7 £ 1,555.85 $ 1,992.56
प्रति घण्टा आय € 74.4 £ 64.83 $ 83.02
प्रति मिनेट आय € 1.24 £ 1.08 $ 1.38
प्रति सेकेन्ड कमाई € 0.02 £ 0.018 $ 0.02
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो Giovanni Reynaबायो, यो उसले कमाएको हो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… जर्मनीमा औसत व्यक्तिले कम्तिमा १.१ वर्ष काम गर्नुपर्दछ € ,1.1०,००० कमाउन, जुन कि जियोभन्नी रेना एक महिनामा कमाउँछ।
यो स्पष्ट छ कि जियोभन्नीको लेखनको समयमा शरीर कला हुँदैन। बरु ऊ in फिट र १ ईन्चको मध्यम - प्रभावशाली उचाईमा दाग नलगाउने छाला flaunting बरु प्रेममा छ।
ऊ निश्चित छ कि ट्याटू बिना राम्रो देखिन्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जियोभान्नी धूम्रपान गर्दैनन् वा गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा पिउँदैनन्। एक पेशेवर को रूप मा, आफ्नो भलो को लागी सबै भन्दा स्वस्थ र तीखो रहन आवश्यकता को बारे मा सचेत।
तथ्य #4- FIFA रेटिंग:
जियोभन्नीसँग फेब्रुअरी २०१ at को जस्तै overall 63 को समग्र फिफा रेटिंग छैन। यद्यपि उसको रेटिंग्स उल्का वृद्धिमा छ भन्ने तथ्यलाई खारेज गर्ने कुनै ठाउँ छैन। यो किनभने लेख्ने समयमा उनीसँग शीर्ष-उडान फूटबल खेल्ने केहि महिनाको अनुभव छ।
त्यहाँ सँधै नम्र शुरुआत हुन्छ। छवि क्रेडिट: SoFIFA।
मिडफिल्डर लेखनको समयमा धर्ममा ठूलो हुँदैन। जस्तो कि विश्वासको मामिलामा उसको असर निश्चय पनि कम गर्न सकिदैन। जे होस्, सम्भवतः जिओभन्नी रेनाका आमाबाबुले उनलाई इसाई धार्मिक विश्वास अपनाउन हुर्काएको हुनुपर्छ।
जियोभन्नी रेना विकी पूछताछ:
यस तालिकाले जियोभन्नी रेनाको बारेमा छिटो र छोटो जानकारी प्रदान गर्दछ।
जियोवन्नी रेना जीवनी तथ्य (विकी इन्क्वायरी)
पुरा नाम: जियोवन्नी अलेजान्ड्रो रेना
उपनाम: कप्तान अमेरिका
अभिभावक: डेनियल इगन रेना (आमा) र क्लाउडियो रेना (पिता)
भाइहरू: ज्याक रेना (लेट), जोआ रेना
बहिनी: क्यारोलिना रेना
पारिवारिक मूल: अमेरिका, अर्जेन्टिना र पोर्तुगाली परिवारको उत्पत्ति
स्थान उहाँ हुर्कनुभयो: बेडफोर्ड, न्यूयोर्क।
जन्म स्थान: सुन्दरल्याण्ड, इ England्ल्यान्ड।
उचाइ:6फी 1 भित्र (1.85 एम)
व्यवसाय: मिडफिल्डर आक्रमण गर्दै
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: जिओवानी रेनाको बचपन कहानी र जीवनी पढ्न को लागी धन्यवाद - एक फुटबलर अक्सर भनिन्छ अमेरिकी फुटबल सपना.
At LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।